Ndezvipi zviri nani kuisa Xenon? kuisa xenon
Chokufamba nemotokari murima kwakakomba dambudziko kunyange vatyairi ruzivo. kuchengeteka Kutarisira anoenderana zvinhu zvizhinji, asi chikuru basa iri vaitambira chiedza unhu rima. With veMubatanidzwa gasi-pakuyerera (akaviga) mwenje mukana kusvika rinorema usiku dzokutyaira mamiriro anenge mazuva ose. Asi pano chinovapo mubvunzo anonzwisisa sei zvakanakisisa kuisa Xenon, nekuti kune marudzi akasiyana-siyana pamusoro payo.
Famba, saka ufambe? Kana iwe kuponesa?
All huripo kuvesa vezvikwata kuti xenon mwenje inogona mapoka mapoka maviri:
1 Chigaro Factory Ndakamisa (Matsushita, Koito / Denso, Hella, AL).
2. Dzinovaka yeKorea uye Chinese kugadzirwa, izvo inotengeswa muzvitoro.
Zvirokwazvo vazhinji akanga atova noruzivo kubva kune zvakaitika kuti yakadaro fekitari chikwata uye chii Chinese nyepera. Low-unhu Korean-Chinese dzakabatana havagoni kupa dzose jekeso pomugwagwa, uye upenyu hwavo nebasa iri kakawanda duku kupfuura fekitari. Kunyange zvazvo pakutanga zvinogumbura uye vane zvakawanda zvinodhura, asi pakupedzisira vadzoke kubva isingadhuri kupfuura zvavo rweruzhinji dzomuzana Asian.
Price uye ukoshi
Kwakadaro Pfungwa inoita zvakafanana sezvo mutengo uye kukosha, vane tsika yakasiyana zvachose, uye ichi ndicho kunyanya pachena kana paine dambudziko, nani bheji xenon.
Price - ndiro mari kuti mari pakarepo, asi mutengo - ndidzo inopfupikisa izvo anodarika panguva yakararama. Shoma motokari Varidzi kuvimba kwerunyararo mari murombo-unhu motokari zvinoriumba, nekuti zvinoratidzika kuti 200-300 rubles mwedzi - kwete zvokuti mari. Zvisinei, vaviri makore Chinese cheapo anogona kuputsa kupinda bhajeti yenyu iri rakakura buri. Kuenzanisa, yemakambani xenon, izvo zviri kupfuura mutengo kwaizova zvikuru mutengo-zvinobudirira, kureva. To. Iva kukwanisa nokutendeka kushumira kupfuura gore rimwe.
Huru misiyano xenon muzvikamu
Sezvambotaurwa, kune Asian analogues waisiyana fekitari zviruva kunaka kuita uye chiedza goho uye hwose. Staff xenon (mufananidzo - munyaya) inopenya zvinooneka chichiwedzera (20-30%) uye ruripo chete Mabumba D1R, D1S, D2R, D2S, D4R, D4S, uye ayo ruvara tembiricha kuti 4300 K. In mwenje zvinoda rinokosha optics, akaverenga chaizvo pasi kugadzwa kwavo, saka chete kutsiva navo headlights, muchiitiko ichi kuita.
Kugadzwa xenon dzose mharidzo kuchaita kutsvaka kwazvo rework optics. Original rambi nezvigadziko D kwemakore anopfuura mana pane zuva ndichibvunza kushandiswa. Kana zvakanaka akaisa Manyiminya zvinhu nokuda xenon Mabumba haangazorori dazzle motokari vatyairi, izvo yekudyidzana kuvandudza motokari makachengeteka.
Korean uye Chinese xenon inoitwa chero mhando chivharo uye siyana ruvara tembiricha kubvira 3000 K uye anopera 12,000 K. The kunonyanyisa upenyu basa mwenje izvi ndiwo makore 1.5, asi kazhinji havasi kushanda pashure vaviri mwedzi, ndine nguva nenguva ino uyewo Anotadzira hedhiraiti reflector.
Zvakanakira kugara xenon
- Galvanzie nguva vakapiswa xenon Mabumba - 3-4 seconds.
- High Kupenya nokuda mukugadzira yepamusoro uye optimally vakasarudzwa parameters (kuvesa modes simba Kudzikamiswa).
- Long basa upenyu.
- Availability wokudzivirira redunhu pamusoro pfupi-redunhu uye akaramba ari zvemagetsi redunhu mudziyo. Kana Mwenje dzakabvarurwa kana vasingadaro, kugara kuvesa zviumbu regai kupisa, kusiyana Chinese dzomuzana.
ndichifunda Serial chikwata "unomutevera" magetsi parameters chomwenje, kuti Ivo kusanduka nenguva. Pashure xenon (rambi) iri kudziyirwa, izvozvo kutigumbura vanotsigira kugadzikana simba 35 W, uye iyo rakagadzirirwa. Kana magetsi kana voltage zvaanobva kushivirirana, zvinoitika kure chomwenje. Pashure akatendeuka chaanoonekwa pashure dzimwe nguva richashandurwa kure woga, chichava chiratidzo chokuti iye achishumira wake izwi, uye inofanira kutsiviwa.
Yeuka kuti Xenon rambi vanofanira nguva dzose kushandurwa kuti vadzivise vaviri kusiyana ruvara chiedza, kureva. A. With nguva ivo "kutendeuka zvitema" uye chiedza mudziyo mutsva achava yakasiyana nyika yekare. Uye chete mudziyo, asi kubva batch zvakasiyana, vanogona zvishomanana kusiyana ruvara.
Zvazvakashatira Korean uye Chinese dzomuzana
• Long-kuvesa nguva Mabumba (20 masekonzi -.. 3 min).
• Small upenyu basa (1 mwedzi -. Makore 1.5).
• The yepakutanga rambi Osram uye Philips dzimwe nguva haana dzakakodzerana Korean, Chinese namatombo yakafanira kune mamwe mamiriro-voltage unhu.
• High Unshielded wiring iri zvishoma iri kunze hedhiraiti housings (injini mupanda), izvo zvinogona kukonzera zvemagetsi chipingaidzo uye kutyora kuputira zvinogona zvakakuvadza magetsi.
• Yakavhariridzwa pamusoro hapana chiedza girobhu racho muna kuvesa chinogumbura chinoshayikwa, saka anoenda pasi pamwe girobhu racho (kutsva ignitor).
Dambudziko guru yose xenon rambi panosangana H ndechokuti girobhu racho zvakabatana kwachiri achishandisa silicone guruu kana ematongerwo. Painenge neshungu nayo runopwa uye iiswe pamusoro izvo, girazi reflector uye mukati girazi ari muchimiro whitish Dombo, iro "anouraya" chaanoonekwa kwemwedzi mishomanana, nokuti smoky girazi havagoni kuratidza chiedza, asi chete absorbs izvozvo, saka nemiwo mukuru kupisa. Overheating zvikonzero kurukutika unodzivirira lacquer rukoko uye ipapo girazi pachayo. nokukurumidza zviedza izvi zvichabviswa kuchinjwa, uye "vagokungurusa panze" muitiro ndiyo nguva zhinji anodhura pane kutenga nguva yakatarwa.
Installation xenon mwenje pamwe proprietary mhando D kuti njodzi siyana. chinu yavo akashongedzerwa aine simbi bhandeji wakabata mudziyo zvakanaka panosangana epurasitiki. zvakagadzirwa Izvi zvinoita zvaidiwa kwakarurama chafariz hurumende mwenje iri Manyiminya ino. Kwete akakurudzira kutsiva nguva galogenki xenon nhumbi nguwani H kana halogen Mabumba wakawedzera kugona, t. To. Chinenge nguva dzose kuguma muna kuedza kwakadaro vanofanira kutenga nezviedza itsva. Ko kutsiva Manyiminya zvinhu mukati kwavari kuvandudza nhau, kureva. E. Isa izvo.
Kubva pane zvataurwa kunofanira kuva chimwe mhedziso: yakanakisisa xenon - mudonzvo. Zvisinei, zhinji motokari varidzi uye aivimbwa vezera. About kuti, chii zvinodiwa zvinofanira kusarudzwa chiedza motokari yako, taura pamusoro.
Bi-Xenon kana xenon?
Kana kuti vakanyika uye chikuru danda anoenderana imwe rambi, unofanira biksenon, uye kana siyana, xenon. In wokutanga Dip nezvinhu kure chiedza chinja kunoitika ndiEzekieri nokutamira chinu kana anozunungusa shutter.
Chivharo - resimbi chikamu rambi, iyo zvakabatana motokari wiring. Kusarudza zvakanaka xenon optics, zvinokosha kuziva kuti zvinofanira kuva. Information pamusoro izvi zvinogona kuwanikwa mubhuku basa kana kungoita kutarisa "chizvarwa" rambi.
Achishamisika pamusoro kuti xenon mhando nani kuisa, vatyairi kureva uye hwihwinyara ruvara. Nyaya iyi kunobva tembiricha kuti xenon:
• 3000 K pave yellowish Hue. Izvi xenon tumanki.
• By 4300 - yendarama Naiwo mufaro. mwenje aya anoshandiswa motokari ine mwero xenon. Vane inonyanya chekubuda unodiwa.
• By 5000 - chena chiedza chetsika.
• 6000 K - chena-mutema Hue.
• 8000 K - rinokwanisa kucheneruka Naiwo mufaro.
• 10,000 K - rinobatanidza maviri vakaparara - uye manganese Violet.
• 12,000 K - Lilac-Violet chiedza.
Yeuka kuti sezvo kushanda xenon chiedza richachinja zvishoma nezvishoma kuchinja kuti rwebhuruu Hue.
The kushanda musimboti xenon
Fitting Xenon akavanza (Engl. Abbr., Meaning "mukuru kuchinyanya buditsa")
kupa yakakwirira azvipire kunyaradzwa uye vakachengeteka kana uchityaira. Chiedza bhuku mumwenje dzakadaro buditsa mwenje. The mumidziyo vakazadzwa musanganiswa akasiyana vanokudzwa magasi, kusanganisira xenon aripo. On the ionized fuma zvakunoita yakakwirira voltage (zviuru zvinoverengeka. Volts), zvichiguma kumwedzi chinhu chakakombama. Zvisinei, sezvo chikazozikamwa, motokari bhatiri anogona kupa volts 12 chete, uye kuvesa Unit, anonziwo "kupomba ignitor," mimics anodiwa ano kuti vesa. mudziyo uyu ndiye Starter mutsa kutanga mwenje, uye adapteri 12 Anochinja shoma chiuru watts or.
The chikuru mukana xenon raro kukwanisa kupa kunyange jekeso pamwe musiyano mukuru uye ane simba chiedza danda. Light Xenon headlamps zvikuru kupfuura nekaviri tichienzanisa halogen chiedza, saka chero zvipingamupinyi mumugwagwa kana munofamba nevanhu achifamba parutivi pomugwagwa, mutyairi anogona kuona pachine.
Kuwedzera musoro chiedza, anoiswa sezvo xenon bvungapfunga mwenje.
Xenon kugadzwa rinosanganisira Kit, izvo zvinosanganisira rambi zviumbu kutanga-kuvesa, kugadzirira navo, uye mukuru-voltage waya.
Zvayakanakira xenon okuvimba
• High chiedza goho (luminous simba nekubudisa akapfuudza 2-3 nguva simba rakawanda).
• Long basa upenyu (kusvika makore mana kubva pakutanga mwenje).
• Kugara chiedza goho, yakazvimirira kuchinja mains voltage.
• High simba kunyatsoshanda (35W akatsiva 60-100 watt mwenje).
Zvinobvumirwa nomutemo kuisa xenon bvungapfunga marambi?
Kuti tinzwisise zvinodzidziswa rambi anogona kuiswa munzvimbo bvungapfunga, kamwe zvakakodzera kubata peculiarities ose PTF pachavo.
Bvungapfunga zviedza ndiwo kwokunze chiedza iwoyu motokari Unit, uyewo dzinokosha, pasinei kuti kutamba basa zvimwe chiedza. Somugumisiro, havana anowanika uye mhando mwenje kushandiswa. Somuenzaniso, kana vakapinda netsamba "H", izvo zvinoreva kuti uyu mhando ungano inofanira chete kushandiswa halogen mwenje. In pamberi tsamba D muridzi motokari vanofanira kuziva kuti pane vari akagovera gasi-chiedza, kureva xenon mwenje.
Saka, xenon bvungapfunga marambi yakagadzirirwa kushandisa halogen mwenje, kuisa zvisiri pamutemo. chirwere ichi inogona kutungamirira chirango yezve kodzero kwemwedzi mitanhatu kana kupfuura. Sezvineiwo, mutemo uyu kunorevawo kuti headlamp.
Zvisinei, avo motokari varidzi vanenge akashongedzerwa renyu motokari PTF akanyorerwa kuti Xenon kana akatenga motokari pamwe nezviedza akadaro haagoni kunetseka.
Bvungapfunga mwenje, izvo vakapakata yokumwe motokari iri fekitari, ndezvaJehovha boka D. The musiyano iri pasina reflector uye kuva izvo chaiyo iyo inounganidza chiedza akapararira danda, iyoyo kunyange jekeso of mugwagwa pamberi muchina.
xenon kugadzwa mitemo
Installation kwacho xenon mwenje kashoma kusiyana galogenok kuwedzera. Musiyano chete ndechokuti "zvokudya" pazuva rokupedzisira zvakananga kubva motokari iri-bhodhi Network. In Xenon rambi simba riri kusvitsa kuburikidza kuvesa chikwata.
The huru dambudziko pakagadzwa xenon kuti zvinowana mukuru-voltage waya kuburikidza rwemberi chifukidziro headlamps. Kuti aite izvi, unofanira vanochera buri mairi, uwandu izvo dzinoenderana kukura anther, kuuya wakakwana rambi. Kuburikidza yokutanga mutobvu waya. Zvino rwunopera dzinodzvova, izvo zvinoramba tightness mwenje.
Tips nokuti Kusarudza xenon
Kana uchisarudza chiedza chitsva motokari yako, nguva dzose yeuka chendarama ushe: "miser inobhadhara kaviri", saka usaora kunyengedzwa nemitengo yakaderera, inopenya kavha uye vanowatengesa mazano pamusoro sei zvakanakisisa kuisa xenon. Chokutanga, bvunza mugadziri, zvakawanda chigadzirwa nokurondedzerwa, uyewo chii garandi uye kana ruripo zvachose kuti zvigadzirwa izvi.
Uyezve, tapota cherechedza kuti iri here zvakasimba xenon mutengo achava yekudyidzana kupfuura Kunyepa. Somuenzaniso, mukuru-unhu zvigadzirwa Philips zvakarurama atambira mukurumbira munyika, asi ava vari vamwe vagadziri anonyengera vasinganyari counterfeiting pefiyumu mano. Low mutengo, inaccurately kugadzirwa chigadzirwa, chenhando kavha kana misspelled mashoko mairi - izvi zvose tiri zviratidzo Kunyepa xenon.
Sei uye sei kushandisa kuve chokuenzanisa nacho?
Akatungamirira luminaires nokuti yakaturikwa ceilings
Common inowanikwa, kuti Samsung TV - chii? Sei kushandisa slots vanhuwo inowanikwa module (vanhuwo inowanikwa (CI) mu LCD TVs
"Panasonic" (cordless): Features, ongororo, rondedzero, dzokorora yakanakisisa yokutevedzera
Sony Smart Watch: Review, Magadzirirwo. Sony SmartWatch Smart Watch 2: mitengo uye wongororo
Scene panyaya zvechiuto. Military apiwa enactment wokuimba; asi manyorero
Metallic (pendi kuti motokari): features, mafomu uye wongororo
How kuti musha wako zvakanaka?
Kusimbisa midziyo: zvavo mishonga. How kusimbisa pangagara
Partitions "Knauf": nokurondedzerwa, mudziyo vanodhirowa negomo zvemichina
Cornflower zvitema - mushonga kana muchetura?
Chiito cheFrench kuva: kugadziriswa nenguva nekufungidzira
Ndege magadzirirwo. patani zvinhu. The namaapuro A321 ndege
"Lavita" - mavhitaminzi kuvakadzi. Reviews, mirayiridzo kushandiswa, akafanana
Nei mwana akakungurutsa meso ake mudenga? zvikonzero
How kuyera pamapfudzi kuti kusona kana zvipfeko rwokusarudza?
Michini Heaters - nevatengi wongororo